अष्ट्रेलियामा आएका नयाँ विद्यार्थीलाई ९ वटा सुझाव
अष्ट्रेलिया विशेषः यसरी दुईवटा क्रेडिट लिँदा पछि पोस्ट स्टडी भिषा लिन कुनै अप्ठ्यारो त पर्दैन ?
एजेन्सी । म मास्टर्स अफ प्रोफेसनल अकाउन्टिङ डिग्री पढ्दैछु । मेरो कोर्सको अवधि १०४ हप्ताको छ र जम्मा १२ वटा विषय पढ्नुपर्ने छ ।
अष्ट्रेलियाको डार्विनमा नेपाली संस्कृति एवम् परिकार महोत्सव हुँदै
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको डार्विनस्थित नेपालीहरुको छाता संगठन नेप्लिज एसोसिएयसन अफ नर्दन टेरिटोरी (एनएएनटी)ले नेपाली संस्कृति एवम् परिकार महोत्सव–२०१९ आयोजना गर्न लागेको छ। डार्विनको प्रमुख प्रदर्शनीस्थल डार्विन वाटर फन्टमा आगामी जुलाई २७ तारिख शनिबारका दिन महोत्सव गर्न लागिएको महोत्सव प्रचार प्रसार समितिका संयोजक युवराज पन्तले जानकारी दिए ।
तीन वर्षदेखि नेपाल बस्दै आइरहेका अष्ट्रेलियन नागरिक पक्राउ
पोखरा । पोखरामा बालयौन दुराचारमा संग्लन रहेको आरोपमा अस्ट्रेलियन प्याराग्लाईडिङ पाइलटलाई पक्राउ गरेको छ ।
अष्ट्रलिया विशेषः विद्यार्थी भिषा थप्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी
अष्ट्रेलियामै रहेर विद्यार्थी भिषाको लागि पुनः आवेदन दिएका विद्यार्थीहरूको आवेदन अस्वीकृत हुने दर पछिल्लो समयमा बढेको देखिएको छ । विशेष गरी सब–क्लास ४८५
अष्ट्रेलिया विशेषः यस्तो भएमा तपाईलाई तीन वर्षसम्म अष्ट्रेलिया फर्कन नपाउने गरेर प्रतिबन्ध लाग्नसक्छ
अष्ट्रेलिया विशेषः बैंकहरुले होम लोनमा ४ प्रतिशत किन चार्ज गरिरहेका छन् ?
प्रश्नः अष्ट्रेलियाको रिजर्भ बैंकले अफिसियल क्यास रेटको बारेमा गत मंगलबार गरेको निर्णयअनुसार १.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । तर पनि घर किन्ने होम लोन निकाल्दा बैंकहरुले किन ४ प्रतिशतको हाराहारीमा चार्ज गरिरहेको हुन्छ?
अष्ट्रेलिया विशेषः भिषा सकिएको चार महिना भयाे, शरणार्थी (रिफ्युजी) भिषाको लागि आवेदन दिन पाउँछ कि पाउँदैन ?
अष्ट्रेलिया विशेष: घर खरिद गर्दा लाग्ने स्ट्याम्प ड्युटीमा बचत कसरी गर्ने
प्रश्नः अस्ति एक ठाउँमा जग्गा लिएर घर बनाउन मिल्ने प्रोजेक्ट हेर्न गएका थियौं । पहिले जग्गा नामसारी हुने र त्यसपछि मात्र घर बनाउन पर्ने हुँदा स्ट्याम्प ड्युटीमा बचत हुन्छ भन्ने जानकारी पायौं के यसो गरेर घर बनाउँदा सस्तो मुल्यमा पाइने हो त?
अष्ट्रेलिया विशेषः यस भिसाका लागि न्यूनतम योग्यता के—के हुन्?
यस भिसाका लागि न्यूनतम योग्यता के—के हुन्?